Salamo 51 Midika andininy and andininy | TOKO VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Fianarana Baiboly Salamo 51 Midika andinin-teny araka ny andalana
Androany isika dia hanao fikarohana Salamo 51 izay midika hoe andalan-tsoratra masina ary matoky izahay fa hanampy antsika hanao ny marina amin'ity soratra masina ity ny fanahy masina. Alohan'ny hanombohantsika, dia mivavaka isika. Ry Rainay any an-danitra, manandratra anao izahay mandritra izao fotoana mahafinaritra nomenao anay hahita andro mahafinaritra toy izao, misaotra anao izahay satria efa ampinganay sy ampinganay izahay, hisandratra anie ny anaranao. Tompoko, rehefa miditra amin'ny teninao izahay, dia mivavaka mba hitondran'ny fanahy masina anay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Izahay dia mametraka ny tenanay ho eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina, mangataka aminao izahay mba hampianarinay anay sy hamaky zavatra ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Ray, amin'ny farany, aza avela hanohitra antsika io teny io, fa amin'ny alalany, avelao isika hanafaka amin'ny herin'ny ota amin'ny anaran'i Jesosy.
Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô,
Araka ny famindram-ponao;
Araka ny haben'ny famindram-ponao,
Vonoy ny heloko. Sasao madio aho mba ho afa-keloka,
Ary diovy aho amin'ny fahotako. Fa miaiky ny fahadisoako aho,
Ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Aminao irery ihany no nanotako,
Ary nanao izao ratsy izao eo imasonao aho,
Mba ho hita ianao rehefa miteny ianao,
Ary tsy manan-tsiny rehefa mitsara ianao. Indro, nateraka tamin'ny heloka aho.
Ary tamin'ny fahotana no torontoronina ahy ny reniko. Indro, fahamarinana ao am-po no irinao;
Ary ao amin'ny miafina no ampahafantarinao ahy ny fahendrena. Diovy hysopa aho, dia hadio;
Sasao aho, dia ho fotsy fotsy mangatsakatsaka. Ampandreneso fifaliana sy fifaliana aho,
Hifaly ny taolana novakivakinao. Afeno ny fahotako ny tavanao,
Ary vonoy ny heloko rehetra. Mamorona fo madio ho ahy, Andriamanitra ô,
Ary havaozy hiorina tsara ny fanahiko ato amiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza esorina amiko ny Fanahinao Masina. Avereno amiko ny fifalian'ny famonjenao,
Ary tohizo amin'ny Fanahinao malala-tanana aho. Dia hampianariko ny mpandika lalàna ny lalanao,
Ary ny mpanota hiova fo ho anao. Afaho amin'ny fandatsahan-dra aho, Andriamanitra ô,
Andriamanitry ny famonjena ahy,
Ary ny lelako hihira ny fahamarinanao. Tompo ô, sokafy ny molotro,
Ary ny vavako hitory ny fiderana anao. Fa tsy famonoana zavatra no sitrakao, raha tsy izany dia homeko izany;
Tsy sitrakao ny fanatitra dorana. Ny sorona ataon'Andriamanitra dia fanahy torotoro sy fo torotoro.
Ireo, Andriamanitra ô, tsy mba hataonao tsinontsinona. Manaova soa amin'i Ziona araka ny sitrakao;
Amboary ny mandan'i Jerosalema. Dia ho sitrakao ny fanatitry ny fahamarinana,
Miaraka amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra dorana manontolo;
Dia hanatitra vantotr'ombilahy eo ambonin'ny alitaranao ireo.
Ny Salamo 51 dia miresaka ny amin'ny volan'ny olona iray izay nibolisatra nandritra ny fotoana ela. Olona iray izay voan'ny herin'ny ota ny fiainany sy ny fisiany. Ity salamo ity dia miresaka momba ny olona maniry fahamarinana amin'ny endriny manta, olona iray izay tsy mahita ny tenany ho olona mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Ity salamo ity dia taratry ny fiainan'ny olona mangataka famindram-po amin'Andriamanitra.
Raha te hahalala bebe kokoa dia andao hofakafakaina ao amin'ny andininy ity bokin'ny Salamo ity.
Ary diovy aho amin'ny fahotako.
Ity andininy vitsivitsy voalohany amin'ny soratra masina ity dia maneho ny fiainan'ny olona mangataka famindram-po. Mamindrà fo amiko araka ny famindram-ponao, araka ny haben'ny famindram-ponao. Ny famindram-pon'ny tompo dia tsy mety tapitra. Ny bokin'ny Salamo faha-136 dia milaza fa misaora an'ny Tompo fa tsara Izy ary maharitra mandrakizay ny famindram-pony. Ny famindram-pon'ny tompo dia tsy misy farany.
Ny andininy faharoa dia maneho fa Andriamanitra irery ihany no mahay manasa ny fahotantsika amin'ny ràn'i Jesosy Kristy Zanany lahitokana. Ny ran'i Kristy no ampy hanala ny fahotana. Ity andininy ity dia manaiky fa tsy misy zavatra hafa afaka manasa ny fahotan'olombelona afa-tsy Andriamanitra.
Fa miaiky ny fahadisoako aho,
Mba ho hita eo am-pitenenana fotsiny ianao, Ary tsy hanan-tsiny, raha mitsara.
Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'ny ohabolana fa izay manafina ny fahotany dia ho faty fa izay miaiky sy mahafoy azy kosa dia hahazo famindram-po. Ny dingana voalohany mankany amin'ny fahazoana famelan-keloka dia amin'ny fanekena fa nanota ianao. Ny fahotantsika dia eo anatrehan'Andriamanitra ary aminy rehetra no nanotantsika rehetra.
Marina sy mahitsy Andriamanitra. Tsy manasazy na manome tsiny ny olona noho izy tsy nanao na inona na inona. Ho hita eo ianao rehefa miteny sy tsy manan-tsiny rehefa mitsara.
Indro, nateraka tamin'ny heloka aho.
Ary tamin'ny fahotana no torontoronina ahy ny reniko. Indro, Ianao no maniry ny fahamarinana anaty,
Ary amin'ny miafina anjara Hampahalala ahy fahendrena ianao.
Izany dia hanasongadinana fa nandova ota tamin'ny ray aman-drenintsika isika, toy ny nandovan'izao tontolo izao ota tamin'i Adama, lehilahy voalohany. Na ny kibo aza miteraka sivy volana dia voaloto sy feno ota. Hoy ny bokin'ny Romana ho an'ny samy efa nanota avokoa ka tsy mahatratra ny voninahitr'Andriamanitra.
Andriamanitra dia mankasitraka ny fahamarinana na dia amin'ny atiny aza. Midika izany fa ny maha-lahy na maha-vavy antsika dia tsy tokony ho raharaham-bahoaka irery, tokony ho tena izy sy tena misy amin'ny fieken-keloka ataontsika isika na dia tsy misy mijery aza.
Diovy hysopa aho, dia hadio;
Ary vonoy ny heloko rehetra.
Mandra-pahatongan'ny fanadiovana dia tsy misy fanadiovana. Mandritra izany fotoana izany, ny hysopa dia midika hoe ny ran'i Jesosy. Tsy misy zavatra hafa afaka manasa ny fahotantsika afa-tsy ny ran'i Jesosy. Tsy misy na inona na inona afaka hahatonga antsika fotsy kokoa noho ny oram-panala afa-tsy ny ran'i Jesosy.
Rehefa diovin'ny ran'i Kristy isika dia tonga olom-baovao ary lasa ny zavatra taloha. Ny tavan'ny Tompon'ny tompo dia ho takona amin'ny fahotantsika, rehefa nosasan'ny ran'i Kristy sarobidy izy ireo.
Aza manary ahy hiala eo anatrehanao,
Ary aza esorina amiko ny Fanahinao Masina. Avereno amiko ny fifalian'ny famonjenao,
Ary tohizo amin'ny Fanahinao malala-tanana aho. Dia hampianariko ny lalanao ny mpandika lalàna, ary hibebaka aminao ny mpanota.
Rehefa mavesatra loatra amin'ny ain'ny lehilahy ny enta-mavesatry ny ota, dia horoahina izy. Izany dia satria ny mason'ny Tompo dia marina loatra ka tsy mahita ota. Nanomboka nanana olana i Saoly rehefa nampiditra fahotana tamina tanany izy. Ny fanahin'Andriamanitra dia nomba an'i Saola, fa rehefa niditra ny ota, dia nahafoy ny ainy ny fanahin'ny tompo, ary nampijalian'ny fanahy maloto izy.
Tohano aho amin'ny fanahinao malala-tanana eto dia midika hoe manohana ahy amin'ny fanahinao masina. Ny soratra masina dia milaza fa rehefa mipetraka ao aminao ny hery nanangana an'i Kristy tamin'ny maty dia hamelombelona ny vatanao mety maty izany. Ny herintsika dia mila hatanjaka amin'ny herin'ny fanahy masina.
Afaho amin'ny fandatsahan-dra aho, Andriamanitra ô,
Ary ny vavako hitory ny fiderana anao.
Rehefa lanin'ny herin'ny ota isika, mazàna ny zavatra ataon'ny devoly dia ny meloka ao am-pontsika. Ity fahatsapana ho meloka ity dia hanakana antsika tsy hikatsaka ny famonjena ao amin'i Kristy Jesosy satria tsapantsika fa ny enta-mavesatry ny fahotantsika dia be loatra noho izay azon'Andriamanitra avela.
Izany no nanjo an'i Jodasy Iskariota. Reraka noho ny fahatsapana ho meloka tamin'ny zavatra nataony izy ary tamin'ny farany, fa tsy nitady famelan-keloka dia namono tena kosa izy.
Fa tsy famonoana zavatra no sitrakao, raha tsy izany dia homeko izany;
Ireo, Andriamanitra ô, tsy mba hataonao tsinontsinona.
Lasa ny andro izay ankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra dorana. Tsy sarobidy intsony ny ran'ny ondrilahy na omby. Misy ra izay sarobidy kokoa noho ny ran'ny ondrilahy na omby, dia ny ran'i Jesosy.
Ny soratra masina dia milaza fa ny sorona ataon'Andriamanitra dia fanahy torotoro sy torotoro ary fo manenina tsy mba hataon'Andriamanitra tsinontsinona. Midika izany fa rehefa mangataka famelana amin'Andriamanitra isika dia tsy maintsy manana fo torotoro, fo mahatsiaro tena ho matotra noho ny ratsy natao ary ny tena fibebahana no tsy maintsy harahina. Ireo no sorona ankasitrahan'Andriamanitra, tsarovy ny soratra masina milaza fa tsy mila fahafatesan'ny mpanota Andriamanitra, fa fibebahana amin'ny alalàn'i Kristy Jesosy.
Manaova soa amin'i Ziona araka ny sitrakao;
Fitalahoana amin'Andriamanitra ity mba tsy hanakana ny zavatra tsara amin'ny fiainantsika noho ny ota. Indraindray ny ota dia mampiato ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona. Ity ampahany amin'ny salamo ity dia miangavy ny hanaovan'Andriamanitra zava-tsoa ho an'i Ziona raha sitrany.
Ny fiainanao no Ziona, ny asanao, ny fanabeazana, ny fanambadiana, ny fifandraisana ary izay rehetra mahaliana anao dia i Ziona. Ny sorona hatolotrao eo amin'ny alitaran'i Jehovah dia Fisaorana.
Previous lahatsoratraAndao hianarana avy amin'ny Salamo 150
Next lahatsoratraAhoana ny fomba handresena ny krizy ara-bola amin'ny maha-Kristiana
Andinin-Baiboly 10 Tsy tokony hohadinoinao rehefa mivavaka mba hahazoana famelan-keloka
Vavaka ho an'ny firenena atsimon'i Afrika
Fifandraisana amin'ireo sampy ao an-tranon'ny Raiko
Hevitra manohitra ny fihemorana
Vavaka hanoherana ny nofy ratsy mandritra ny fitondrana vohoka